Ny HomePod dia tsy misy tahiry intsony ao amin'ny Apple Store | Internet amin'ny Internet Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny volana martsa lasa teo dia nanamafy izany i Apple naka toerana aoriana ny HomePod, mampifantoka ny ezaka rehetra ataonao amin'ny mini HomePod. Andro vitsy taorian'ity fanambarana ity, ny modely Space Gray dia namidy saika manerana an'izao tontolo izao, ary ilay maodely fotsy ihany no navela.
Mandritra ny ora vitsivitsy, ny HomePod miloko fotsy tsy misy intsony ao amin'ny Apple Apple Store, na dia hitantsika any amin'ny Apple Stores hafa toa an'i Spain aza (ny modely ao amin'ny Space Gray dia tsy misy) miaraka amin'ny fandefasana ny ampitso sy ny mety hisintomana azy any amin'ny magazay ara-batana sasany.
Rehefa mijanona tsy mivarotra ny vokariny rehetra intsony i Apple, haingana ny fizarana ao amin'ny tranonkala dia tsy misy intsony, na dia amin'izao fotoana izao aza, ao amin'ny tranokalan'i Etazonia, misy izy io, noho izany dia azo inoana kokoa fa miandry ny hamoahana ny HomePod manerantany i Apple mba hanafoanana ity vokatra ity maharitra.
Rehefa ny Niato ny iMac Pro, iray amin'ireo vokatra natombok'i Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia tsy mbola nahita ny fahombiazan'ny orinasa, ny referansa rehetra momba an'ity modely ity dia nesorina tao amin'ny Apple Store an-tserasera tao anatin'ny ora vitsy taorian'ny famarotana.
Na eo aza ny kalitao natolotry ny HomePod, mpandahateny solo voalohany an'i Apple (tsy misy marika Beats), dia mety tsy nahomby tamin'ny tsena. noho ny vidiny lafo, na dia nampihena ny vidiny aza volana vitsivitsy taorian'ny nanombohany tamin'ny 329 euro. Miaraka amin'ny mini HomePod amin'ny 99 euro, Apple dia nahavita nikapoka ny lohany tamin'ny lohany ary manomboka izao dia hifantoka amin'ny ezaka rehetra hanatsarana azy amin'ny kinova ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny HomePod dia tsy misy tahiry intsony ao amin'ny Apple Store an-tserasera any Etazonia
Ny Apple Watch Series 7 dia somary matevina kokoa ary tsy dia misy bika eo amin'ny efijery